ဝိုင်းစု ရဲ့ မယ်သီတာ သီချင်းလေး နဲ့ အထာကျကျလေး ဆော့ကစားပြ လိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ Tiktok video – Let Pan Daily
ပရိသတ်အသည်းကျော်လေး ဖြူ​ဖြူထွေး က အမြဲလိုလို Tiktok ဆော့ကစားလေ့ ရှိသူပါ။ ဖြူ​ဖြူထွေးဟာဆိုရင် အနုပညာအရည်အချင်း ပြည့်ဝသူဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို အမြဲလိုလိုဝေမျှလေ့ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးဟာ ကြော်ငြာတွေများစွာနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကို လက်ခံ ရိုက်ကူးနေရတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမက သူတစ်ပါးကိုလည်း အမြဲကူညီတတ်တာပြီး အလှူအတန်းတွေကို ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းပေးတဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြူဖြူထွေးကတော့ ဝတ်စားဆင်ယဥ်မှုတွေမှာလည်း မြန်မာဆန်ဆန် ဖက်ရှင် ဝတ်စုံလေးတွေအပြင် ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်စုံလေးတွေကိုလည်း လိုက်ဖက်ညီညီ ဝတ်ဆင်တတ်ပါ ။ ဒါ့အပြင် သူမက ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေအပြင် ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း မကြာခဏ ဖော်ပြပေး တာပါတယ်။ ယခုမှာလည်း ဖြူဖြူထွေးက ပရိသတ်တွေ ချစ်အားပိုလောက်မယ့် Tiktok လေးကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ အဆိုတော် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ မယ်သီခတာသီချင်းလေးကို အထာကျကျ ဆော့ကစားထားတာပါ။ ကြည့်မိသူတွေ အချစ်ပိုရလောကိအောင် ဆော့ကစားထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အဆိုပါ ဗီဒီယိုလေးကို ချစ်ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှု့စေဖို့အတွက် Myanmarload မှ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်……. ။
ပရိသတ္အသည္းေက်ာ္ေလး ျဖဴ​ျဖဴေထြး က အၿမဲလိုလို Tiktok ေဆာ့ကစားေလ့ ရွိသူပါ။ ျဖဴ​ျဖဴေထြးဟာဆိုရင္ အႏုပညာအရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူျဖစ္ၿပီး သူမရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြကို အၿမဲလိုလိုေဝမွ်ေလ့ရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ျဖဴျဖဴေထြးဟာ ေၾကာ္ျငာေတြမ်ားစြာနဲ႔ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြကို လက္ခံ ႐ိုက္ကူးေနရတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူမက သူတစ္ပါးကိုလည္း အၿမဲကူညီတတ္တာၿပီး အလႉအတန္းေတြကို ရက္ရက္ေရာေရာ လႉဒါန္းေပးတဲ့ သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျဖဴျဖဴေထြးကေတာ့ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈေတြမွာလည္း ျမန္မာဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ ဝတ္စုံေလးေတြအျပင္ ေခတ္ေပၚဖက္ရွင္စုံေလးေတြကိုလည္း လိုက္ဖက္ညီညီ ဝတ္ဆင္တတ္ပါ ။ ဒါ့အျပင္ သူမက ပရိသတ္ေတြအတြက္ ခ်စ္စရာပုံရိပ္ေလးေတြအျပင္ ဗီဒီယိုေလးေတြကိုလည္း မၾကာခဏ ေဖာ္ျပေပး တာပါတယ္။ ယခုမွာလည္း ျဖဴျဖဴေထြးက ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္အားပိုေလာက္မယ့္ Tiktok ေလးကို တင္ေပးလာခဲ့ပါတယ္။
ဒါကေတာ့ အဆိုေတာ္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္းရဲ႕ မယ္သီခတာသီခ်င္းေလးကို အထာက်က် ေဆာ့ကစားထားတာပါ။ ၾကည့္မိသူေတြ အခ်စ္ပိုရေလာကိေအာင္ ေဆာ့ကစားထားတဲ့ ျဖဴျဖဴေထြးရဲ႕ အဆိုပါ ဗီဒီယိုေလးကို ခ်စ္ပရိသတ္ေတြ ၾကည့္ရႈ႕ေစဖို႔အတြက္ Myanmarload မွ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။ ဗီဒီယိုေလးကို ၾကည့္ၿပီး အသည္းေလးေတြေပးခဲ့ဖို႔ မေမ့လိုက္ပါနဲ႔ေနာ္……. ။
ရင်နှစ်မွှာ ပေါ်လွင်အောင် ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူး